Xagee ayey kala marayaan xisbiyadu, yeyna u badantahay inuu soo baxo? - NorSom News
mandag, mars 1, 2021
Home Politikk/siyaasad Xagee ayey kala marayaan xisbiyadu, yeyna u badantahay inuu soo baxo?
Xagee ayey kala marayaan xisbiyadu, yeyna u badantahay inuu soo baxo?
Waxaa mudo bil iyo maalmo ah ay inaga xigaan doorashada dalkan Norway, waxaana hada soo xoogeysanayo ololaha doorashada oo ay xisbiyadu isku hardinayaan.
Si caadiga ah waxaa xiliyada doorshada ka horeysa ay wargeysyada wadankan qaadaan codbixin online-ah, taas oo looga qiyaas qaato ilaa xad qaabka ay u dhici karto doorashada caadiga ah ee bisha September.
Listhaug iyo Erna wey baneyn lahaayeen kuraasta:
Wargeyska VG oo kamid ah wargeysyada ugu waaweyn dalkan Norway ayaa qaab online-ah ku qaaday codbixin uu ku eegayo taageerada dadka ee xisbiyada. Waxaana soo baxday in hadii codbixintaas laga qiyaas-qaato ay dhici laheyd dowlada hada jirto ee Erna Solberg.
Xisbiga shaqaalaha ayaa codbixintan ku noqday xisbiga ugu weyn, wuxuuna helay 30%, halka Høyre uu helay 22,7%, iyada oo uu soo raaco FRP oo helay 12,6%. Sp oo maalmahan xowli adag ku socday ayaa helay 11,9%. Krf iyo Sv waxey labaduba heleen min 5,2%, halka Rødt iyo Venstre ay wada heleen 3, 2%.
Hadii codbixintaas laga qiyaasqaato waxey xisbiyada bidixdu helayaan 89 kursi oo baarlamaanka ah, halkan qolyaha midigtana ay isku dar heli lahaayeen 77 kursi. Baarlamaanka Norway ayaa ka kooban 169 xildhibaan, xisbigii ama xisbiyadii isku dar hela 85 kursi iyo wixii ka badan.
Hadii arintan laga qiyaas qaato waxaa la dhihi karaa inay u badantahay inuu dhaco isbadal, isla markaana ay meesha ka baxdo dowlada Erna Solberg.
Previous article(Maqaal): Xisbigee ayaa mudan inaan codka siino doorashadan?
Next articleUSA: Somalisk Al shabaab-leder drept i luftangrep
Xisbiyada oo maanta u fariistay wada hadalada ay xukuumad kusoo dhisayaan.
Goormee ayaa xukuumada cusub ee Erna Solberg lasoo dhisi doonaa?: Su´aal in badan nala soo weydiiyay.
Kiiska soo galootiga oo ahaa qodobka ugu muhiimsanaa ee codbixiyayaasha doorashadii baarlamaanka Norway ee sanadkan.
Keydka NorSom Velg måned mars 2021 (3) februar 2021 (51) januar 2021 (55) desember 2020 (50) november 2020 (67) oktober 2020 (75) september 2020 (54) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)
Kategorier Velg kategori Annonse Covid-19 Doorashada 2017 Norway Fikrado Forsiden Meninger Meninger/Fikrado News in other languages NorSom Magazin Nyheter Nyheter/Warcusub Økonimi/Dhaqaale Politikk/siyaasad sport Utdanning/Waxbarasho Vedio/Muuqaalo Wararka caalamka